Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Seychelles njem njem » New labọ nyocha 24/7 COVID-19 na Seychelles na-enye ndị njem ohere ọzọ
New 24/7 COVID-19 nyocha ụlọ nyocha na Seychelles
Seychelles Medical Services Pty, ụlọ ọrụ ahụike ọhụrụ edebanyere na Seychelles mepee ụlọ nyocha nyocha mbụ nke COVID-19 nke kachasị ọhụrụ na Seychelles.
Facilitylọ ọrụ ọhụụ na-enye ndị ọrụ nlegharị anya nke ọma na nke enweghị nsogbu.
Lablọ nyocha ọhụrụ ahụ nwere ike ịhazi nyocha 30,000 kwa ụbọchị na ule ahụ nwere ike soro mkpụrụ ndụ ihe nketa na ụdị dị iche iche nke COVID-19.
Ka ọ na-erule ngwụsị nke May 2021, Seychelles Medical Services Pty na-atụ anya imeghe alaka ise na Mahé, Praslin na La Digue.
Facilitylọ ọrụ ahụ bụ nke abụọ na Seychelles iji nyefee ọrụ nyocha nke COVID-19 PCR na-abụghị Euro Medical Family Clinic nke malitere ọrụ ha ọnwa ole na ole gara aga, ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ a nwere ikike ka ukwuu.
Facilitylọ ọrụ ahụ na-achọ ịnye ọrụ nyocha dị mfe na nke na-enweghị ntụpọ maka ndị njem nleta tupu ha efega mba ọzọ. A ga-agbatịkwa ọrụ ndị a na ahịa mpaghara maka onye ọ bụla chọrọ akwụkwọ ikike njem mba ofesi maka njem.
Ebe mbu imeghe n’okpuru aha ahia di na Eden Island na “The Blue Building” (n’akuku Bravo Restaurant). Ka ọ na-erule ngwụsị nke May 2021, Seychelles Medical Services Pty na-atụ anya imeghe alaka ise na Mahé, Praslin na La Digue. Ogige niile ga-arụ ọrụ na 24/7 ndabere.